Ukulima nokuhlakulela insimu yombila – The Ulwazi Programme
Ukuhlakula kusho ukususa ukhula noma lokhu okuzimilele ensimini emuva kokuba sekwatshalwa umbila nezintanga. Kuqalwa kutshalwe umbila nezintanga bese kuhlakulwa. Kuhlakulwa ngoba kusuke sekukhona lokhu okungatshalwanga njengo cadolo, nesishiphi sendoda, nokhukhunathi nokunye okungadingeki, ngoba kusuke kuzobangisana nezitshalo ezidingekayo bese kuphuma isivuno esincane. Ngoba zisuke zizoncintelana ngomsoco nangamanzi asemhlabathini zigcine zikhipha umbila noma amathanga nencanga amancane noma esizacile nekhwebu elincane nelimfishane.
Kwezinye izindawo kutshalwa ngezandla kusetshenziswe amageja, kwezinye kutshalwa ngogandaganda, abanye ngezinkomo. Kuyenzeka ngesikhathi kutshalwa kungene umbila omningi emgodini kuthi uma usukhula kudingeke ukuthi uhlukaniswe ukuze ukhule kahle. Uma usuqala ukukhahlela ukhululekile kushaye umoya phakathi kwezitshalo, kuba nesikhathi sokuya kohlakula ngoba kudingeka ukuthi umbila ukhule unamathele phansi khona ungazo shayeka kanye nokhula uma uhlakula, futhi kwenziwela ukuthi ucadolo ungabimningi ngesikhathi sekuvunwa. Konke lokhu kwenziwa ngokulingana endaweni.
Makuzoyiwa kohlakulwa kulungiselwa ngayizolo ukuze kuvukwe kakhulu ngakusasa yonke into imi ngomumo kuphekwe amahewu azophuzwa emasimini, kusale omunye ekhaya ozosala abeke izimbiza ukuze abantu abadala bathole ukudla ngesikhathi nalaba abasensimini bahanjiselwe ukudla. Uma engekho okhona ekhaya kubuya oyedwa azopheka bese ekuhambisa ukudla. Ngokuthi kusuke kuphume bonke omakhelwane beye emasimini abo kuye kuthi mese kudliwa bashayanise amageja ukubanga umsindo betshela nalaba ukuthi isikhathi sokuhlala phansi kudliwe, ngoba basuke bekude bengeke bezwe mekumenyezwa ukuthi kuthiwani, umsindo wegeja wawusho ukuhlala phansi kudliwe noma sekuyophunyulwa emakhaya abekhaliswa kathathu amageja. Futhi uma kushoniwe komakhelwane bekungangenwa ensimini ngoba bekuba nesiqhotho noma uzamcolo.
Kwesinye isikhathi bekwenziwa ilima kumuntu obenenkinga mhlawumbe uyedwa ekhaya abanye basematohweni ekhaya kumele kutshalwe, wenza ilima ameme abantu abazomlekelela bese egaya utshwala mekukhona nabesilisa apheke kakhulu. Ngaleyondlela ubeshesha ukuqeda naye ngoba yonke into beyenziwa ngesikhathi esisodwa. Uma kukhona onensimu enkulu apheke kakhulu naye ubecela ilima bese bemlekelela uma sebeqedile bekuphunywa kuyiwe kweyomunye njalo njalo kuze kuqedwe ukuhlakula. Ukuze kufike isikhathi sokuvuna sekuqediwe kwenziwe okunye njengokucaka izindlu futhi uma umuntu ehlala engenzi lutho omakhelwane bayabuzana ukuthi kwenzenjani bese bekubuza basize lapho bengakwazi khona.
Yonke lento bayenza ngokulandela isimo somhlaba ngoba babekwazi ukuxhumana nezinyoni noma nayini eyimvelo. Bekubakhona inyoni ekhalayo ihlezi esihlahleni icula, bona ke bebekutolika lokho bethi ithi akuqalwe kulinywe. Yayithi inyoni (phezu komkhono) ibilokhu isho kanjalo bese bethi ithi akulinywe noma akuhlakulwe – phela imikhono esebenzayo mawulima noma uhlakula. Nokuthi ihlokohloko melakha isidleke emithini emide lisuke lisho ukuthi kuza imvula enkulu. Ngokubona lezozidleke babe sebezilungiselela ukuthi kuza imvula. Insingizi nayo ibika imvula enkulu kokunye kuphephuke izindlu uma usiba lwayo luphonseke emanzini noma emfuleni kuba nemvula enkulu nomoya.